ကိုဗစ် ၁၉ အတွက် Mask နှာခေါင်းစည်း ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်နိုင်မလား (အပိုင်း ၁)
ုမြန်မာ ချည်မျှင်နဲ့ အထည်စက်ရုံ (ဝမ်းတွင်း) (ဓါတ်ပုံ ဦးအောင်ဇင် Jasper Knights Textile Co)
Covid 19 အန္တရာယ်ကာကွယ်ရာမှာ အရေးပါတဲ့ နှာခေါင်းစည်းတွေကို ပြည်တွင်းမှာ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ သုံးနိုင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ Jasper Knight ချည်မျှင်နဲ့ အထည်အလိပ် ကုမ္ပဏီက အင်ဂျင်နီယာ ဦးအောင်ဇင်က ပြောပါတယ်။ ဒီလိုသုံးနိုင်အောင် ဘယ်လို လုပ်နိုင်မယ်၊ ဘာနည်းပညာတွေ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို ပြောပြပေးမှာပါ။
ကိုဗစ် ၁၉ အတွက် Mask နှာခေါင်းစည်း ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်နိုင်မလား
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အန္တရာယ်ကာကွယ်ရာမှာ အရေးပါတဲ့ နှာခေါင်းစည်းတွေကို ပြည်တွင်းမှာ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ သုံးနိုင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ Jasper Knight ချည်မျှင်နဲ့ အထည်အလိပ် ကုမ္ပဏီက အင်ဂျင်နီယာ ဦးအောင်ဇင်က ပြောပါတယ်။ဒီလိုသုံးနိုင်အောင် ဘယ်လို လုပ်နိုင်မယ်၊ ဘာနည်းပညာတွေ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို ဒီတပတ်မှာ ပြောပြပေးမှာပါ။
ဦးအောင်ဇင်။. ။“မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှာခေါင်းစည်း ထုတ်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် နှာခေါင်းစည်းထုတ်တဲ့ နည်းပညာပေါ့လေ၊ သူက အပိုင်း ၂ ပိုင်းရှိပါတယ်။ တပိုင်းကတော့ နှာခေါင်းစည်း အတွက် သုံးတဲ့ ပိတ်အမျိုးအစားပေါ့။ အဲဒီပိတ်အမျိုးအစားက ကျနော်တို့ ပုံမှန်သုံးနေတဲ့ ရက်ကန်းထည်လို့ ခေါ်တဲ့ ရက်ထည်တို့ ကြိုးထည်တို့ မဟုတ်ဖူး၊ စွပ်ကျယ်လို အသားမျိုးဖြစ်တဲ့ ကြိုးထည်လည်း မဟုတ်ဖူး။ သူက non-woven (ရက်ထည်မဟုတ်တဲ့) ပိတ်အမျိုးအစားမျိုးပေါ့။ အဲဒီလိုပေါ့ လိုအပ်တဲ့ ပိတ်အမျိုးအစားက non-woven လိုပါတယ်။ ဒီ non-woven ကိုထုတ်တဲ့ နည်းပညာက မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မရှိသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ လုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒါက နံပတ် ၁ အချက်ပါ။
အဲဒီ ရက်ထည်မဟုတ်တဲ့ non-woven ပိတ်အမျိုးအစားကို ရပြီဆိုရင် နောက်တခုက စပြီး ချုပ်တဲ့ စံနစ်ပေါ့လေ။ ချုပ်တဲ့စံနစ် လိုပါတယ်။ သူ့ကို ရိုးရိုး surgical mask - ခွဲစိတ်ခန်းသုံး နှာခေါင်းစည်းမှာ ဆိုရင် ၃ လွှာ စံနစ်တကျ ထပ်ရပါတယ်။ တကယ်လို့ KN- 95 တို့ N-95 တို့ ဆိုရင်တော့ ၅ လွှာ ထပ်ရပါတယ်။ အဲဒီ ၅ လွှာကို စံနစ်တကျ ထပ်ပြီးတော့ ထုတ်တဲ့ စက်မျိုးပေါ့လေ။ အဲဒီလို စက်မျိုး လိုပါတယ်။”
မေး။. ။“အဲဒါဆို နည်းပညာက အဓိက ၂ ခုပေါ့နော်။”
ဦးအောင်ဇင်။. ။“ဟုတ်ကဲ့ ၂ ခုပါ။”
မေး။. ။“ပထမဆုံးက ပိတ်စထုတ်တဲ့ နည်းပညာ၊ ဒုတိယကတော့ ဒီ mask ဖြစ်အောင် နှာခေါင်းစည်း ဖြစ်အောင် ချုပ်တဲ့ နည်းပညာပေါ့။ ဆိုတော့ ပိတ်စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပထမ ပြောပြပေးပါဆရာ။ မြန်မာပြည်မှာ အများသုံးနေတဲ့ အဝတ်ပိတ်စက ဒီကိုဗစ် ၁၉ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်း ရှိပါ့မလားဆရာ”
ဦးအောင်ဇင်။. ။“အများသုံးနေတဲ့ ရက်ကန်းနဲ့ ရက်တဲ့ပိတ်စပေါ့လေ။ အဲဒီပိတ်စကတော့ ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါပိုးကို ခုခံကာကွယ်နိုင်တဲ့ စွမ်းအင်တော့ မရှိပါဘူးလို့ပဲ ပြောရမှာ ပေါ့လေ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ သူတို့က ချည်ထည်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ရော၊ ပြီးတော့မှ အဲဒီချည်တွေကို အကျော် အကြိုလေးတွေနဲ့ ရက်ထားတယ်။ သာမန် မျက်စိအားနဲ့ကြည့်ရင်တော့ ဒီပ်ိတ်စက ပိတ်နေတယ်လို့ မြင်ရပေမယ့် အဲ့ဒီ ချည် တခုနဲ့ တခု ကြားထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အပေါက်တွေ ပေါ့လေ။ အဲဒီ အပေါက်တွေက ဗိုင်းရပ်စ် အရွယ်အစားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ အင်မတန်မှ ကြီးမားပါတယ်။ ကိုဗစ် ၁၉ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ အရွယ်အစားက ၀.၁၂၅ မိုက်ခရွန် အရွယ်အစားနဲ့ ရှိနေတယ်။ ကျနော်တို့ ရက်ကန်း ရက်ထည်တွေမှာ ရှိနေတဲ့ ချည်တွေ တခုနဲ့တခု အကျော်အကြိုဖြစ်လို့ ပေါ်လာတဲ့ အပေါက်တွေက ၁၀၀ မိုက်ခရွန်လောက် အထိ ရှိတယ်။ အဆက အဲဒီလောက်ကွာနေတော့ တကယ်လို့ ဗိုင်းရပ်စ်က ပိတ်ပေါ်မှာ လာကပ်မယ် ဆိုရင် အဲဒီ ဗိုင်းရပ်စ်က အသက်ရှုလမ်းကြောင်းထဲကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဖေါက်ဝင်နိုင်မယ့် အနေထား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ရိုးရိုးရက်ကန်းပိတ်တွေ၊ ထိုးတဲ့ပိတ်တွေကတော့ သုံးဖို့အတွက် မသင့်တော်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။”
မေး။. ။“အဲဒါဆို နှာခေါင်းစည်းလုပ်တဲ့ ပိတ်စက ဘယ်လိုပိတ်စလဲ ရှင်းပြပေးပါဆရာ။”
ဦးအောင်ဇင်။. ။“နှာခေါင်းစည်း လုပ်တဲ့ ပိတ်စကတော့ non-woven fabric ရက်ထည်မဟုတ်တဲ့ ပိတ်စ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိတ်စဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ အခါမှာ ချည်ဘဝကို မသွားပဲနဲ့ ဖိုင်ဘာ ဆိုတဲ့ အမျှင်ကလေးတွေ ဘဝက နေပြီးတော့ စုပြီးတော့ လိုချင်တဲ့ အထူအပါးကို စီထပ်ပြီးတော့ ပိတ်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတာပါ။ ရက်ထည် မဟုတ်သော ပိတ်စပေါ့ non-woven ပိတ်စ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကျတော့ ဘာလဲဆိုရင် အမျှင်တခုနဲ့ တခု ထပ်ထားတဲ့ ကိစ္စမို့လို့ အကွက် ၂ ခု ကြားထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့၊ ရက်ထည်တွေလို ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့၊ ဒီ အကျော် အကျကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အပေါက်က ပျောက်သွားပြီးတော့ အင်မတန်မှ သေးငယ်တဲ့ အပေါက်တွေ ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ချည်ဘဝကို မရောက်ပဲနဲ့. အမျှင်ဘဝက နေပြီးတော့ တန်းပြီးတော့ ပိတ်ဖြစ်သွားရအောင် လုပ်တဲ့ non-woven ပိတ်စတွေကို သုံးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
အဲဒီ ပိတ်အမျိုးအစားက ပုံမှန်အားဖြင့် ၂ မျိုး သုံးတယ်။ တခုက ဘာလဲဆိုရင် spun bonded ဆိုတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့ non-woven ပိတ်စ အမျိုးအစား။ နောက်တခုက ဘာလဲဆိုရင် melt blown ဆိုတဲ့နည်းပညာနဲ့ ထုတ်တဲ့ non-woven ပိတ်စ အမျိုးအစား။ အဲဒီ ၂ မျိုးကို ထပ်ပြီးတော့ သုံးပါတယ်။”
မေး။. ။“ အဲဒါ။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး မဖေါက်နိုင်ဘူးပေါ့ဆရာ။”
ဦးအောင်ဇင်။. ။ “ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး မဖေါက်နိုင်ဘူးပေါ့။ မဖေါက်နိုင်လောက်အောင် ကျဉ်းမြောင်းသွားတဲ့ အနေအထား။ ရိုးရိုး ခွဲစိပ်ခန်းသုံး နှာခေါင်းစည်း တခု မှာ ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး တွေ့တဲ့. ပထမ အလွှာ ကိုတော့ spun bonded non-woven ပိတ်စကို သုံးတယ်။ အဲဒီ spun bonded က ဘာနဲ့လုပ်ထားသလဲ ဆိုရင် သူ့ကို သုံးတဲ့ပစ္စည်းက ပေါ်လီပရိုပလင်း ဆိုတဲ့ ပလပ်စတိတ် အနွယ်ပေါ့လေ။ အဲဒါကို လုပ်ထားတယ်။ အဲဒီ ပလပ်စတိတ်ကို အရည်ပျော်အောင် ဖျော်ပြီးတော့မှ အဲဒီ ပလပ်စတိတ်ကနေ ညှစ်ထုတ်လိုက်တာ။ ညှစ်ထုတ်လိုက်တော့ အမျှင်ကလေးတွေ ထွက်လာတယ်။ အဲဒီ အမျှင်ကလေးတွေကို ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ တနေရာမှာ အလွှာပါးလေးဖြစ်အောင် လုပ်ပြီးတော့ အဲဒီ အလွှာပါးကလေးပေါ်မှာ စီထပ်တဲ့ နည်းပညာပေါ့နော်။ အဲဒါက spun bonded ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီနည်းပညာနဲ့ ထုတ်တဲ့ ပိတ်ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့၊ ချည်ထည်လို အပေါက်တွေ၊ ချည်ကို ရက်တဲ့ ရက်ထည်ကြောင့်ပါတဲ့ အပေါက်တွေ၊ ပျောက်သွားတာ ပေါ့နော်။
နောက်ထပ်အမျိုးအစား တခုကတော့ melt blown ပေါ့လေ။ သူက အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းကလည်း ပေါ်လီ ပရိုပလင်းပါပဲ။ သူ့ကိုလည်း ဘာလုပ်သလဲဆိုရင် အဲဒီ ပေါ်လီပရိုပလင်း ကို အရည်ပျော်အောင် လုပ်တယ်။ ပြီးရင်ညှစ်ထုတ်တယ်။ ညှစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ ဥစ္စာကို လေပူလေအေး ၂ ခုနဲ့ ပုတ်ပြီးတော့ ညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ တနေရာမှာ စုတယ်။ အမျှင်ကလေး တွေကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အထူအပါး အတိုင်းရအောင် စုထားတဲ့ သဘောမျိုး ပဲလေ။ စုထားတဲ့ ပိတ်မျိုးပေါ့။ အဲဒါ မျိုးကို melt blown လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီ melt blown က spun bonded ထက်ပိုပြီးတော့ ကျစ်လစ်တဲ့ သိပ်သည်းတဲ့ အပေါက်နဲတဲ့ ပိတ်စမျိုး ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီတော့ နှာခေါင်းစည်း mask မှာ ဒုတိယအလွှာ ဖြစ်တဲ့ melt blown ကတော့ အဓိက ဗိုင်းရပ်စ်ကို အကာကွယ် ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။”
မေး။. ။“ဒီနှာခေါင်းစည်း ထုတ်ဖို့အတွက် ကုန်ကြမ်းဟာ မြန်မာပြည်မှာ လွယ်လွဝ်ကူကူ ရနိုင်ပါ့မလား ဆရာ”
ဦးအောင်ဇင်။. ။“လောလောဆယ် မြန်မာပြည်ရဲ့ အနေအထားကတော့ အဲဒီကုန်ကြမ်း ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံတွေ မရှိသေးပါဘူး။ အဲဒီအတွက် လောလောဆယ်တော့ မရနိုင်သေးဘူး ခင်ဗျ။ ဒါပေမယ့်လို့ အဲဒီ ပေါ်လီပရိုပလင်း ဆိုတဲ့ ကော်စေ့ အမျိုးအစားကတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ သုံးနေပါတယ်။ အဓိက ပလပ်စတိတ် လုပ်ငန်းတွေ ပလပ်စတိတ်ထည်တွေမှာ အဲဒီ ကော်စေ့ကို သုံးပြီးတော့၊ ကော်စေ့ကို အရည်ညှစ်ပြီးတော့ လိုချင်တဲ့ ပလပ်စတိတ် အချပ်တွေ ထုတ်တဲ့ ပုံစံကတော့ ကျနော်တို့ ဆီမှာ လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒီတော့ ကုန်ကြမ်း အနေနဲ့ ပေါ်လီပရိုပလင်ကို ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း မရှိပေမယ့် ပြည်ပက တင်သွင်းလို့ ရပါတယ်ခင်ဗျ။”
မေး။ ။“စက်တွေ သုံးရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို စက်အမျိုးအစားတွေ သုံးရမလဲ၊ ဘာတွေ လိုမလဲ ဆရာ။”
ဦးအောင်ဇင်။. ။“ခုနက တုန်းက ပိတ်အမျိုးအစား ၂ မျိုးကို ထုတ်တဲ့ စက်အမျိုးအစား ပေါ့လေ။ အဲဒါကတော့ spun bonded ကိုထုတ်တဲ့ စက်အမျိုးအစားရယ်၊melt blown ကိုထုတ်တဲ့ စက်အမျိုးစားရယ်၊ အဲဒီ စက်အမျိုးစားတွေအတွက် ကုန်ကြမ်းကတော့ ပေါ်လီ. ပရိုပလင်း ဆိုတဲ့ ကော်စေ့ကို ကုန်ကြမ်းသုံးပြီးတော့ ပိတ်ဖြစ်အောင် ထုတ်တဲ့ စက်တွေပါ။ အဲဒီ စက်တွေကတော့ လောလောဆယ် ပြည်တွင်းမှာ မရှိသေးဘူး။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ် ဆိုရင်လည်းပဲ ပမာဏက နဲနဲလေးတော့ များတယ်။ နည်းပညာကလည်း နဲနဲတော့ ပါတယ်။ လုပ်ရင်တော့ မဖြစ်ဖူး ဆိုတာ မဟုတ်ဖူး။ ဖြစ်တာတော့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အဆင့်နဲ့ စာလို့ရှိရင် လောလောဆယ် အဲဒီလို ပြည်ပကိုချည်းပဲ ကျနော်တို့က လုံးဝ ပစ်ပယ်လို့ မရဘူး။ သို့သော် အကယ်လို့ ပြည်တွင်းထဲမှာ mask ကို ထုတ်တဲ့ စက်ကိုပေါ့လေ။ အဲလိုစက်တွေကို ပြည်တွင်းထဲမှာ လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ ပြည်ပကနေ နှာခေါင်းစည်း တွေ ဝယ်သုံးနေတာထက် စာလို့ရှိရင် အများကြီး သက်သာတဲ့ နှုန်းထားနဲ့ ကျနော်တို့ ပြည်တွင်းမှာ အစားထိုးပြီး ထုတ်လုပ် နိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ် ခင်ဗျာ။”
ချည်မျှင်နဲ့ အထည်အလိပ် အင်ဂျင်နီယာ ဦးအောင်ဇင်ပါ။ နောက်တပတ်မှာတော့ နှာခေါင်းစည်း ထုတ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ နည်းပညာတွေထဲက နှာခေါင်းစည်း ချုပ်တဲ့နည်းပညာ အကြောင်း ဆက် ပြောပြပေးမယ်ဆိုတာ တင်ပြရင်း ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပွံနဲ့နည်းပညာကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ အန်တရာယျကာကှယျရာမှာ အရေးပါတဲ့ နှာခေါငျးစညျးတှကေို ပွညျတှငျးမှာ ဈေးသကျသကျသာသာနဲ့ သုံးနိုငျအောငျ လုပျပေးနိုငျတယျလို့ Jasper Knight ခညျြမြှငျနဲ့ အထညျအလိပျ ကုမ်ပဏီက အငျဂငျြနီယာ ဦးအောငျဇငျက ပွောပါတယျ။ဒီလိုသုံးနိုငျအောငျ ဘယျလို လုပျနိုငျမယျ၊ ဘာနညျးပညာတှေ လိုအပျတယျဆိုတာကို ဒီတပတျမှာ ပွောပွပေးမှာပါ။
ဦးအောငျဇငျ။. ။“မွနျမာနိုငျငံမှာ နှာခေါငျးစညျး ထုတျမယျ ဆိုလို့ရှိရငျ နှာခေါငျးစညျးထုတျတဲ့ နညျးပညာပေါ့လေ၊ သူက အပိုငျး ၂ ပိုငျးရှိပါတယျ။ တပိုငျးကတော့ နှာခေါငျးစညျး အတှကျ သုံးတဲ့ ပိတျအမြိုးအစားပေါ့။ အဲဒီပိတျအမြိုးအစားက ကနြျောတို့ ပုံမှနျသုံးနတေဲ့ ရကျကနျးထညျလို့ ချေါတဲ့ ရကျထညျတို့ ကွိုးထညျတို့ မဟုတျဖူး၊ စှပျကယျြလို အသားမြိုးဖွဈတဲ့ ကွိုးထညျလညျး မဟုတျဖူး။ သူက non-woven (ရကျထညျမဟုတျတဲ့) ပိတျအမြိုးအစားမြိုးပေါ့။ အဲဒီလိုပေါ့ လိုအပျတဲ့ ပိတျအမြိုးအစားက non-woven လိုပါတယျ။ ဒီ non-woven ကိုထုတျတဲ့ နညျးပညာက မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ မရှိသေးဘူး။ ဒါပမေယျ့ လုပျမယျ ဆိုရငျတော့ လုပျလို့ရပါတယျ။ အဲဒါက နံပတျ ၁ အခကျြပါ။
အဲဒီ ရကျထညျမဟုတျတဲ့ non-woven ပိတျအမြိုးအစားကို ရပွီဆိုရငျ နောကျတခုက စပွီး ခြုပျတဲ့ စံနဈပေါ့လေ။ ခြုပျတဲ့စံနဈ လိုပါတယျ။ သူ့ကို ရိုးရိုး surgical mask - ခှဲစိတျခနျးသုံး နှာခေါငျးစညျးမှာ ဆိုရငျ ၃ လှာ စံနဈတကြ ထပျရပါတယျ။ တကယျလို့ KN- 95 တို့ N-95 တို့ ဆိုရငျတော့ ၅ လှာ ထပျရပါတယျ။ အဲဒီ ၅ လှာကို စံနဈတကြ ထပျပွီးတော့ ထုတျတဲ့ စကျမြိုးပေါ့လေ။ အဲဒီလို စကျမြိုး လိုပါတယျ။”
မေး။. ။“အဲဒါဆို နညျးပညာက အဓိက ၂ ခုပေါ့နျော။”
ဦးအောငျဇငျ။. ။“ဟုတျကဲ့ ၂ ခုပါ။”
မေး။. ။“ပထမဆုံးက ပိတျစထုတျတဲ့ နညျးပညာ၊ ဒုတိယကတော့ ဒီ mask ဖွဈအောငျ နှာခေါငျးစညျး ဖွဈအောငျ ခြုပျတဲ့ နညျးပညာပေါ့။ ဆိုတော့ ပိတျစနဲ့ ပတျသကျပွီး ပထမ ပွောပွပေးပါဆရာ။ မွနျမာပွညျမှာ အမြားသုံးနတေဲ့ အဝတျပိတျစက ဒီကိုဗဈ ၁၉ ဗိုငျးရပျဈပိုးကို ခုခံကာကှယျနိုငျစှမျး ရှိပါ့မလားဆရာ”
ဦးအောငျဇငျ။. ။“အမြားသုံးနတေဲ့ ရကျကနျးနဲ့ ရကျတဲ့ပိတျစပေါ့လေ။ အဲဒီပိတျစကတော့ ကိုဗဈ ၁၉ ရောဂါပိုးကို ခုခံကာကှယျနိုငျတဲ့ စှမျးအငျတော့ မရှိပါဘူးလို့ပဲ ပွောရမှာ ပေါ့လေ။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ သူတို့က ခညျြထညျဖွဈအောငျလုပျလိုကျရော၊ ပွီးတော့မှ အဲဒီခညျြတှကေို အကြျော အကွိုလေးတှနေဲ့ ရကျထားတယျ။ သာမနျ မကျြစိအားနဲ့ကွညျ့ရငျတော့ ဒီပိတျစက ပိတျနတေယျလို့ မွငျရပမေယျ့ အဲ့ဒီ ခညျြ တခုနဲ့ တခု ကွားထဲမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ အပေါကျတှေ ပေါ့လေ။ အဲဒီ အပေါကျတှကေ ဗိုငျးရပျဈ အရှယျအစားနဲ့ နှိုငျးယှဉျရငျတော့ အငျမတနျမှ ကွီးမားပါတယျ။ ကိုဗဈ ၁၉ ဗိုငျးရပျဈရဲ့ အရှယျအစားက ဝ.၁၂၅ မိုကျခရှနျ အရှယျအစားနဲ့ ရှိနတေယျ။ ကနြျောတို့ ရကျကနျး ရကျထညျတှမှော ရှိနတေဲ့ ခညျြတှေ တခုနဲ့တခု အကြျောအကွိုဖွဈလို့ ပျေါလာတဲ့ အပေါကျတှကေ ၁၀၀ မိုကျခရှနျလောကျ အထိ ရှိတယျ။ အဆက အဲဒီလောကျကှာနတေော့ တကယျလို့ ဗိုငျးရပျဈက ပိတျပျေါမှာ လာကပျမယျ ဆိုရငျ အဲဒီ ဗိုငျးရပျဈက အသကျရှုလမျးကွောငျးထဲကို လှယျလှယျကူကူ ဖေါကျဝငျနိုငျမယျ့ အနထေား ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ ရိုးရိုးရကျကနျးပိတျတှေ၊ ထိုးတဲ့ပိတျတှကေတော့ သုံးဖို့အတှကျ မသငျ့တျောတဲ့ အနအေထားမှာ ရှိပါတယျ။”
မေး။. ။“အဲဒါဆို နှာခေါငျးစညျးလုပျတဲ့ ပိတျစက ဘယျလိုပိတျစလဲ ရှငျးပွပေးပါဆရာ။”
ဦးအောငျဇငျ။. ။“နှာခေါငျးစညျး လုပျတဲ့ ပိတျစကတော့ non-woven fabric ရကျထညျမဟုတျတဲ့ ပိတျစ ဖွဈပါတယျ။ ပိတျစဖွဈအောငျ လုပျတဲ့ အခါမှာ ခညျြဘဝကို မသှားပဲနဲ့ ဖိုငျဘာ ဆိုတဲ့ အမြှငျကလေးတှေ ဘဝက နပွေီးတော့ စုပွီးတော့ လိုခငျြတဲ့ အထူအပါးကို စီထပျပွီးတော့ ပိတျဖွဈအောငျ လုပျထားတာပါ။ ရကျထညျ မဟုတျသော ပိတျစပေါ့ non-woven ပိတျစ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒါကတြော့ ဘာလဲဆိုရငျ အမြှငျတခုနဲ့ တခု ထပျထားတဲ့ ကိစ်စမို့လို့ အကှကျ ၂ ခု ကွားထဲမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့၊ ရကျထညျတှလေို ဖွဈပျေါနတေဲ့၊ ဒီ အကြျော အကကြွောငျ့ ဖွဈပျေါနတေဲ့ အပေါကျက ပြောကျသှားပွီးတော့ အငျမတနျမှ သေးငယျတဲ့ အပေါကျတှေ ပျေါလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ ခညျြဘဝကို မရောကျပဲနဲ့. အမြှငျဘဝက နပွေီးတော့ တနျးပွီးတော့ ပိတျဖွဈသှားရအောငျ လုပျတဲ့ non-woven ပိတျစတှကေို သုံးဖို့ လိုအပျပါတယျ
အဲဒီ ပိတျအမြိုးအစားက ပုံမှနျအားဖွငျ့ ၂ မြိုး သုံးတယျ။ တခုက ဘာလဲဆိုရငျ spun bonded ဆိုတဲ့ နညျးပညာနဲ့ ထုတျလုပျတဲ့ non-woven ပိတျစ အမြိုးအစား။ နောကျတခုက ဘာလဲဆိုရငျ melt blown ဆိုတဲ့နညျးပညာနဲ့ ထုတျတဲ့ non-woven ပိတျစ အမြိုးအစား။ အဲဒီ ၂ မြိုးကို ထပျပွီးတော့ သုံးပါတယျ။”
မေး။. ။“ အဲဒါ။ ဗိုငျးရပျဈပိုး မဖေါကျနိုငျဘူးပေါ့ဆရာ။”
ဦးအောငျဇငျ။. ။ “ဗိုငျးရပျဈပိုး မဖေါကျနိုငျဘူးပေါ့။ မဖေါကျနိုငျလောကျအောငျ ကဉျြးမွောငျးသှားတဲ့ အနအေထား။ ရိုးရိုး ခှဲစိပျခနျးသုံး နှာခေါငျးစညျး တခု မှာ ဆိုရငျ ပထမဦးဆုံး တှတေဲ့. ပထမ အလှာ ကိုတော့ spun bonded non-woven ပိတျစကို သုံးတယျ။ အဲဒီ spun bonded က ဘာနဲ့လုပျထားသလဲ ဆိုရငျ သူ့ကို သုံးတဲ့ပစ်စညျးက ပျေါလီပရိုပလငျး ဆိုတဲ့ ပလပျစတိတျ အနှယျပေါ့လေ။ အဲဒါကို လုပျထားတယျ။ အဲဒီ ပလပျစတိတျကို အရညျပြျောအောငျ ဖြျောပွီးတော့မှ အဲဒီ ပလပျစတိတျကနေ ညှဈထုတျလိုကျတာ။ ညှဈထုတျလိုကျတော့ အမြှငျကလေးတှေ ထှကျလာတယျ။ အဲဒီ အမြှငျကလေးတှကေို ဖွတျတောကျပွီးတော့ တနရောမှာ အလှာပါးလေးဖွဈအောငျ လုပျပွီးတော့ အဲဒီ အလှာပါးကလေးပျေါမှာ စီထပျတဲ့ နညျးပညာပေါ့နျော။ အဲဒါက spun bonded ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီတော့ အဲဒီနညျးပညာနဲ့ ထုတျတဲ့ ပိတျဖွဈတဲ့ အတှကျကွောငျ့မို့၊ ခညျြထညျလို အပေါကျတှေ၊ ခညျြကို ရကျတဲ့ ရကျထညျကွောငျ့ပါတဲ့ အပေါကျတှေ၊ ပြောကျသှားတာ ပေါ့နျော။
နောကျထပျအမြိုးအစား တခုကတော့ melt blown ပေါ့လေ။ သူက အသုံးပွုတဲ့ ပစ်စညျးကလညျး ပျေါလီ ပရိုပလငျးပါပဲ။ သူ့ကိုလညျး ဘာလုပျသလဲဆိုရငျ အဲဒီ ပျေါလီပရိုပလငျး ကို အရညျပြျောအောငျ လုပျတယျ။ ပွီးရငျညှဈထုတျတယျ။ ညှဈထုတျလိုကျတဲ့ ဥစ်စာကို လပေူလအေေး ၂ ခုနဲ့ ပုတျပွီးတော့ ညှဈထုတျပွီးတော့ တနရောမှာ စုတယျ။ အမြှငျကလေး တှကေို ကိုယျလိုခငျြတဲ့ အထူအပါး အတိုငျးရအောငျ စုထားတဲ့ သဘောမြိုး ပဲလေ။ စုထားတဲ့ ပိတျမြိုးပေါ့။ အဲဒါ မြိုးကို melt blown လို့ချေါပါတယျ။ အဲဒီ melt blown က spun bonded ထကျပိုပွီးတော့ ကဈြလဈတဲ့ သိပျသညျးတဲ့ အပေါကျနဲတဲ့ ပိတျစမြိုး ဖွဈလာပါတယျ။ အဲဒီတော့ နှာခေါငျးစညျး mask မှာ ဒုတိယအလှာ ဖွဈတဲ့ melt blown ကတော့ အဓိက ဗိုငျးရပျဈကို အကာကှယျ ပေးတာ ဖွဈပါတယျ။”
မေး။. ။“ဒီနှာခေါငျးစညျး ထုတျဖို့အတှကျ ကုနျကွမျးဟာ မွနျမာပွညျမှာ လှယျလှဝျကူကူ ရနိုငျပါ့မလား ဆရာ”
ဦးအောငျဇငျ။. ။“လောလောဆယျ မွနျမာပွညျရဲ့ အနအေထားကတော့ အဲဒီကုနျကွမျး ထုတျလုပျတဲ့ စကျရုံတှေ မရှိသေးပါဘူး။ အဲဒီအတှကျ လောလောဆယျတော့ မရနိုငျသေးဘူး ခငျဗြ။ ဒါပမေယျ့လို့ အဲဒီ ပျေါလီပရိုပလငျး ဆိုတဲ့ ကျောစေ့ အမြိုးအစားကတော့ ကနြျောတို့ နိုငျငံမှာ သုံးနပေါတယျ။ အဓိက ပလပျစတိတျ လုပျငနျးတှေ ပလပျစတိတျထညျတှမှော အဲဒီ ကျောစကေို့ သုံးပွီးတော့၊ ကျောစကေို့ အရညျညှဈပွီးတော့ လိုခငျြတဲ့ ပလပျစတိတျ အခပျြတှေ ထုတျတဲ့ ပုံစံကတော့ ကနြျောတို့ ဆီမှာ လုပျပါတယျခငျဗြ။ အဲဒီတော့ ကုနျကွမျး အနနေဲ့ ပျေါလီပရိုပလငျကို ပွညျတှငျးမှာ ထုတျလုပျနိုငျခွငျး မရှိပမေယျ့ ပွညျပက တငျသှငျးလို့ ရပါတယျခငျဗြ။”
မေး။ ။“စကျတှေ သုံးရမယျဆိုရငျ ဘယျလို စကျအမြိုးအစားတှေ သုံးရမလဲ၊ ဘာတှေ လိုမလဲ ဆရာ။”
ဦးအောငျဇငျ။. ။“ခုနက တုနျးက ပိတျအမြိုးအစား ၂ မြိုးကို ထုတျတဲ့ စကျအမြိုးအစား ပေါ့လေ။ အဲဒါကတော့ spun bonded ကိုထုတျတဲ့ စကျအမြိုးအစားရယျ၊melt blown ကိုထုတျတဲ့ စကျအမြိုးစားရယျ၊ အဲဒီ စကျအမြိုးစားတှအေတှကျ ကုနျကွမျးကတော့ ပျေါလီ. ပရိုပလငျး ဆိုတဲ့ ကျောစကေို့ ကုနျကွမျးသုံးပွီးတော့ ပိတျဖွဈအောငျ ထုတျတဲ့ စကျတှပေါ။ အဲဒီ စကျတှကေတော့ လောလောဆယျ ပွညျတှငျးမှာ မရှိသေးဘူး။ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမယျ ဆိုရငျလညျးပဲ ပမာဏက နဲနဲလေးတော့ မြားတယျ။ နညျးပညာကလညျး နဲနဲတော့ ပါတယျ။ လုပျရငျတော့ မဖွဈဖူး ဆိုတာ မဟုတျဖူး။ ဖွဈတာတော့ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီ အဆငျ့နဲ့ စာလို့ရှိရငျ လောလောဆယျ အဲဒီလို ပွညျပကိုခညျြးပဲ ကနြျောတို့က လုံးဝ ပဈပယျလို့ မရဘူး။ သို့သျော အကယျလို့ ပွညျတှငျးထဲမှာ mask ကို ထုတျတဲ့ စကျကိုပေါ့လေ။ အဲလိုစကျတှကေို ပွညျတှငျးထဲမှာ လုပျမယျ ဆိုရငျတော့ ပွညျပကနေ နှာခေါငျးစညျး တှေ ဝယျသုံးနတောထကျ စာလို့ရှိရငျ အမြားကွီး သကျသာတဲ့ နှုနျးထားနဲ့ ကနြျောတို့ ပွညျတှငျးမှာ အစားထိုးပွီး ထုတျလုပျ နိုငျမယျလို့ ယူဆပါတယျ ခငျဗြာ။”
ခညျြမြှငျနဲ့ အထညျအလိပျ အငျဂငျြနီယာ ဦးအောငျဇငျပါ။ နောကျတပတျမှာတော့ နှာခေါငျးစညျး ထုတျဖို့ လိုအပျတဲ့ နညျးပညာတှထေဲက နှာခေါငျးစညျး ခြုပျတဲ့နညျးပညာ အကွောငျး ဆကျ ပွောပွပေးမယျဆိုတာ တငျပွရငျး ဒီသီတငျးပတျအတှကျ သိပ်ပှံနဲ့နညျးပညာကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနားလိုကျပါရစေ။